Siansa, teknolojia, fiteny | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Siansa, Teknolojia, Fiteny
Inona moa ny volana sy ny tany?
iza no lehibe kokoa noho ny volana sa ny tany? Ny volana dia satelita amin'ny tany, kely kokoa izy. ... Very hevitra tamin'ny fanontaniana momba ny habe! Mitady hatezerana na faritra amboniny? Ny radius amin'ny tany dia 6 ka hatramin'ny 10 degre. Ny masoandro no lehibe indrindra. ...
Afaka mamerina indray ve ny Electric Nikola Tesla?
Azo averina averina ny fiara elektrika Nikola Tesla? Ny valin'ny fiaran'ny herinaratra Nikola Tesla Ao amin'ny lalàm-by misy herinaratra ao Tesla, izay diso amin'ny mpandray (boaty mainty sy tehina roa ao ambadiky ny mpamily) dia mazava ho azy fa mpandefa. ...
Inona ny liquidus?
Inona no atao hoe liquidus? Vondrona rock ao Abakan Liquidus izy io - eo amin'ny tsipika fizarana ny tsipika miempo tanteraka amin'ny dingana matevina. Ny hevitra mitovy amin'izany, fa ny mifanohitra amin'izany dia solidus. Mari-pana Liquidus (araka ny H. Yoder, 1976) TL - ...
Ahoana ny MDF?
Ahoana no hijoroan'ny MDF? Ny dadatoako Fedya dia mazava fa ny MDF fanafohezana dia midika hoe Medium Density Fiberboard. MDF dia nipoitra ho toy ny fampandrosoana ny fomba maina amin'ny famokarana takelaka fibre. Ny zavatra…
Inona no atao pirinty?
Inona no fanontana? Fanontana printy (imprint English - hamela marika, hisambotra, hanamboarana), ny fananganana dian-tongotra marin-toerana ao anaty psyche aorian'ny traikefa tokana. Izy io dia endrika iray ianaran'ny olona haingana sy maharitra ao ...
Misy mahalala ve ny vita amin'ny etona?
Misy mahalala ve ny vita amin'ny etona? rano, soot, gazy karbonika, gazy karbonika. Vokatra fandoroana menaka sy antifreeze. indrindra ny rano sy ny dioksidan'ny karbaona. toy ny fahalotoana - gazy karbonika ...
Iza sy oviana no nahita ny bakteria?
Iza ary oviana no nahitana bakteria? Sambany nisy bakteria hita tamin'ny alàlan'ny mikraoskaopy optika ary nofaritan'ny mpandinika naturalis holandey Anthony van Leeuwenhoek tamin'ny 1676. Toy ny zavaboary mikraoskaopy rehetra, nomeny anarana ...
Ahoana no tsy mampitovy ny famokarana betsaka amin'ny famokarana betsaka?
Ahoana no tsy itovizan'ny famokarana serial amin'ny famokarana betsaka? Amin'ny famokarana betsaka, ny fanamboarana ny vokatra dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fanatanterahana asa mitohy tsy miverimberina ao amin'ny toeram-piasana.
Aiza ny reniranoko no mikoriana?
Aiza ny reniranon'i Ik? Ik, Bolshoi Ik, renirano ao amin'ny Bashkir ASSR ary ny Tatar ASSR, ny zana-kazo ankavanan'ny Kama. Ny halavany 571 km, faritra fantsona 18000 km2. Mikoriana indrindra ao anatin'ny Bugulma-Belebeevskaya ...
Taiza ary iza no tonga voalohany nitondra jiro mirehitra
Aiza ary iza no voalohany niaraka tamin'ny Volam-by. Toy ny pancake LENIN-ny! "Jiro Ilyich's Light" Ao St. Petersburg Yablochkov Eny, efa nolazaina taminao momba ny jiro ... Ary ny jiro (Jiro, Evlampy) dia efa noforonin'ny tapitrisa ...
Inona ny kolontsaina ara-panahy?
Inona no atao hoe kolontsaina ara-panahy? + Faharetana + Fandeferana + Mandrosoa + Fifaliana + Famoronana + Fangoraham-po + Fahatakarana + Fifantohana + Ny fahatsiarovan-tena no tontolonao anaty miaraka amin'ny tontolo iainana Izany no tsy anananao ary tsy hanana mandrakizay. : ...
Ahoana ny fomba hahazoana oksida klôro? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Inona no fihetsika?
Ahoana ny fomba hahazoana oksida klôro? ClO, ClO2, Cl2O7 ... Inona no fihetsika? Hilaza zava-miafina aminao aho, ny fahazoana oksizena azota dia mahafinaritra kokoa. rehefa reraky ny klôro ianao dia andramo asidra nitrika 3% amin'ny hafanan'ny trano ...
Amin'ny firy fisian'ny hafanana ny rano
amin'ny maripana inona ny rano mangatsiaka ambany aotra. Salama! Ekena amin'ny ankapobeny fa amin'ny tsindry atmosfera mahazatra sy ny fisian'ny fiatoana mikraoba ao anaty rano - ny ati-trano kristaly, manomboka mihombo ny rano amin'ny maripana kely miiba ...
Ny fitsipiky ny fiampangana kumulative.
Ny fitsipiky ny fiampangana miendrika. Rehefa voapoaka ny fiampangana miendrika endriny, ny herin'ny fipoahana dia mitodika mankany afovoan'ny fantsom-pohy ary mihazakazaka mandroso. Ny antsoina hoe tranga Monro dia voamarika - ny vokany, ny mekanisma izay mbola hatreto ...
Inona no atao hoe isomorphisme? homomorphism?
Inona no atao hoe isomorphism? homomorphism? Homomorphism (avy amin'ny homo ... sy ny grika morphe karazany, endrika), ny fiheverana ny matematika sy ny lojika, izay nipoitra voalohany tamin'ny algebra, nefa hita fa tena zava-dehibe tokoa amin'ny fahazoana ny firafitra sy ny haben'ny azo atao ...
Inona ireo teoria farany momba ny fiandohan'ny olombelona?
Inona avy ireo teoria farany momba ny fiandohan'ny olombelona? izany eny, izany no teboka iray manontolo - tsy dia tsotra loatra ny niavian'ny olona iray, araka ny noeritreretin'izy ireo taloha, ohatra, noheverin'izy ireo fa maoderina ...
Mpikomy iza iza ity ??
Mpikomy iza io ?? Mpihoko (mpikomy) - sampan-draharahan'ny miaramila sivily manohitra ny manampahefana. Indraindray koa izy ireo dia antsoina hoe mpanohitra mitam-piadiana, na dia vitsy aza ny fitoviana misy eo amin'ny samy mpiady sy ny mpanohitra. Mpikomy matetika ...
Inona no dikan'ny hoe "miavaka"?
Inona no dikan'ny hoe "miavaka"? tsy mahazatra, mamirapiratra avy amin'ny valalabemandry ... misaotra ny rakibolana manazava manome izao famaritana izao ho an'ny famenony. TSY FAHATONGA: Miavaka, miavaka amin'ny hafa. promiscuous dia teny fiderana raha ny tokony ho izy), midika tsy fenitra ...
Avy aiza ilay anarana hoe "vy mifangaro"?
Avy aiza ilay anarana hoe "vy mifangaro"? Vorone # 769; vy (fanamafisana, fanamaintisana, fikolokoloana) ny fizotran'ny fahazoana sosona vy oksida (Fe3O4, sns.) Miaraka amin'ny hatevin'ny 1-10 ... eo ambonin'ny karbaona na vy vita amin'ny firaka ambany na vy.
Ampianaro aho handika teny, ohatra, NCL ho an'ny mpitsabo - physics. Fantatro ny fomba hamahana ny olana, saingy tsy fantatro ny fomba handika ny soatoavina.
Ampianaro aho handika ohatra ny nKl amin'ny Kl pendant -physics. Haiko ny mamaha olana, fa tsy haiko ny mandika soatoavina. Mampiasa ny fahafaha-mitombo isa iray foana aho nefa tsy manova ny valiny. Ohatra 36 ...
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 2,571.